I-Emulsifying Mixer, Umshini Wokugcwalisa, I-Tanking Mixing - UMaxwell
Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwe-10
Iyaqondakala, izinzile futhi inembe
Isikhathi esisebenzayo nesisebenza kahle ngemuva kokuthengisa
SINIKELA IMikhiqizo EQINILE YOKUQHAWULA
I-Wuxi Maxwell automation Technology Co, Ltd itshaliwe ama-dollar ayisigidi amadola. Sitholakala ku-wuxi High-tech Industry Zone. Sisebenza kakhulu kwezemvelo, kwezokwelapha, ekudleni, ezimbonini zamakhemikhali, nasekuhlanganiseni ukuthuthukiswa, ukukhiqiza nokuthengisa ndawonye.
(Imikhiqizo yethu eyinhloko; imishini yokufaka i-vacuum emulsifying, imishini yokugcwalisa, imishini yokurekhoda, ama-reaction stainless iron, abaxubeki beplanethi, ama-crushers, ama-hydraulic discharge presses, njll.)
I-Wuxi idolobha elihle, eduze nedolobha laseShanghai - idolobha elikhulu kunazo zonke laseChina. Ngakho-ke kufanelekile ukuthunyelwa kwezimpahla emhlabeni kusuka echwebeni le-shanghai.
IMVAKASHI YOKUKHANGELA I-VACUUM
Kungumshini wokugcwalisa olula, ofanele futhi ongabizi.
UKUgcwalisa OKUGCWELE KULULA-AUTO PLASTIC FUTHA KANYE NESIMAKU SEAL
Sihlaziya indlela yokubeka uphawu, yokubamba amashubhu nokugcwalisa umshini wokugcwalisa ishubhu kanye nomshini wokuvala.
Ababambe iqhaza kakhulu ekuxubeni ukhonkolo, esiteshini sokuxhuma ukhonkolo, nepampu kakhonkolo neminye imishini yokwakha.
I-China umphakeli osezingeni eliphakeme uslayidi wepulasitiki